षडानन्द नगरपालिका षडानन्द नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
Read more about विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
Read more about कोभिड– १९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धमा (६५ वर्ष माथिका व्यक्तिहरु साथै अघिल्लो चरणमा छुट स्वास्थ्यकर्मीहरु, म.स्वा. स्वयं सेविकाहरु, जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु सबै) ।
Read more about जनजाति संग्राहलय भवनको लागि नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारे सूचना !!!
Read more about दलित भवनको लागि नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारे सूचना !!!
Read more about सामुदायिक भवनको लागि नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारे सूचना !!!
© 2021 षडानन्द नगरपालिका